UluLungiselela njani uLuhlu lokuKhangela kuTyelelo lweSikolo saMazwe ngaMazwe ngo-2022
UluLungiselela njani uLuhlu lokuKhangela kuTyelelo lweSikolo seHlabathi
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, izikolo ezininzi zamanye amazwe ziye zavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Isizathu silula- njengoko uqoqosho lwehlabathi ludityaniswa ngakumbi, abantu bafudukela kumazwe ahlukeneyo nakwilizwekazi ngethemba lekamva elingcono lezemali.
Uninzi luthi ukukhula kwezithuba kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kukhokelela kwinkcubeko yezikolo zamanye amazwe. Izikolo zamanye amazwe zikhulu ngokubonelela ngemfundo ekumgangatho ophezulu, iziseko zophuhliso, kunye nokukhuthaza inkcubeko yelizwe jikelele yokwazisa kunye nophuhliso.
Nangona kunjalo, zinikwe iindlela ezininzi ezikhoyo, abazali bangaqinisekisa njani ukuba bakhetha esona sikolo silungileyo sabantwana babo.
Kule nqaku, sithetha neengcali ezikhokelayo Isikolo samanye amazwe sasePhnom Penh. Siyabacela ukuba basincede size noluhlu lokutshekisha olunokunceda abazali abatyelele izikolo zamanye amazwe.
Ukucwangcisa utyelelo kwiSikolo seHlabathi
Kutheni ukuBona aBafundi kwiiKlasi zoNene ngexesha leziFundo kubalulekile?
Kuthekani malunga neMirhumo kunye noLwakhiwo lweNtlawulo kwiSikolo saMazwe ngaMazwe?
Abazali kufuneka bacwangcise ngokwaneleyo olona suku lokundwendwela kwisikolo samazwe apheleleyo ngokweenkcukacha. Oku kuthetha ukuba ukunxibelelana nesikolo kunye nokufumana idinga lokundwendwela. Oku kuyakuqinisekisa ukuba akukho zingxaki xa undwendwela isikolo nabantwana bakho.
Ngokweengcali, abazali kufuneka bajonge ukuchitha ixesha elininzi ngosuku oluqhelekileyo lokusebenza esikolweni. Oku kunokwahluka phakathi kosuku olupheleleyo lwesikolo okanye isiqingatha sosuku kude kube yikhefu lesidlo sasemini.
Ukucwangcisa kufuna ukwenza uluhlu lwezinto onokufuna ukuzenza kusuku lokundwendwela. Oku kunokuba-
Ukucela isikolo samazwe aphesheya ukuba sihlale kwenye yeeklasi kwaye sinxibelelane nabanye abantwana.
Ukuthetha nabaphathi abaphezulu besikolo kubandakanya iNqununu, iiNtloko, kunye nooTitshala.
Ukujonga iziseko zophuhliso zesikolo, ngakumbi amagumbi okufundela, iindawo zokudlala, iilebhu, kunye neeholo.
Ukuqonda isilabhasi, ubume bekhosi, kunye nokuqinisekiswa okukhoyo kwisikolo samazwe aphesheya.
Ukuxoxa ngeNtlawulo kunye nolawulo kunye nokuqonda ukuba ulwakhiwo lwentlawulo lusebenza njani.
Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ezona zikolo zibalaseleyo zamanye amazwe ziya kukuvumela ukuba ujonge ixesha lokwenyani iiklasi Ukuqinisekisa ukuba njengomzali ufumana eyona nto izakufunyanwa ngumntwana wakho.
Xa kuvunyelwe ngokufanayo, abazali kufuneka banike ingqwalaselo enkulu kwindlela eqhutywa ngayo iklasi. Izikolo zamazwe aphesheya zitsala italente yokufundisa ebalaseleyo kwaye ukujonga utitshala kunokunceda ekukhanyeni okuninzi kumgangatho wemfundo.
Iingcali zicebisa ukuba ujonge ezi zinto zibalulekileyo zilandelayo xa uhleli eklasini-
Ukujonga uMfundi-Utitshala-Ratio eklasini. Ngokufanelekileyo, ayifanele ibe ngaphezulu kwama-25: 1. Izikolo zamazwe aphesheya zihlawula kakhulu ugxininiso kumanani amancinci
Ukujonga ukuba ngaba utitshala uyabakhuthaza na abafundi ukuba bacinge kwaye babelane ngeembono zabo. Oku kukhuthaza ukucinga ngokukhululekileyo nangokucingisisa kwaye kukhuthaza ukuzithemba.
Ukuqonda amanqanaba oluleko. Nokuba iklasi yenza ingxolo eninzi, lusebenza njani utshintsho, kwaye ngaba bakho abancedisayo ekufundiseni ukunceda utitshala?
Ngaba imfundo ihanjiswa kuphela kwiincwadi zezifundo okanye ngaba utitshala usebenzisa imizekelo yokwenyani yobomi ukunceda abafundi ukuba babambe izihloko ngcono.
Nje ukuba ujonge ezi zinto zibalulekileyo, uya kuba kwimeko engcono kakhulu yokwenza ukhetho lokugqibela.
Alithandabuzeki elokuba xa kuthelekiswa nemirhumo kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo, izikolo zamanye amazwe zibiza kakhulu. Nangona kunjalo, kwimali eyongezelelweyo oya kuthi ekugqibeleni uhlawule, umntwana wakho uya kuxhamla ngeendlela ezininzi ezilungileyo.
Qonda ukuba yeyiphi imodeli yentlawulo, kufuneka ihlawulwe kangaphi imali kwaye yintoni kanye kanye isakhiwo sentlawulo, kubandakanya nenkqubo yokwamkelwa.
Uninzi lweemveliso ezixakekileyo ngokomsebenzi kwaye zihlala zisendleleni, zikhetha ukuhlawula umrhumo weenyanga ezintandathu ukuya kunyaka kube kanye. Kuya kufuneka ubuze le mibuzo kulawulo kwangoko.
Njengomzali, kuya kufuneka uzame ngako konke okusemandleni akho ukufumana iseshoni yobuqu nomntu oyiNqununu yesikolo. Thetha ngokukhululekileyo malunga nento oyilindeleyo nokuba isikolo siza kunceda ukufezekisa okufanayo. Ukukhetha isikolo sesona sigqibo sibaluleke kakhulu oya kusithatha egameni labantwana bakho. A kulungile Isikolo singazibeka ebomini, ngelixa ezimbi zinokuba nefuthe elibi ekwakheni isiseko esifanelekileyo.
Post Previous:I-10 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu e-UK zaBafundi beZizwe ngezizwe